Amavidiyo ahlukanisiwe kakhulu afihla ebuntwini
Okunye Imisebenzi yokuzilibazisa Ividiyo
Izinto eziningi zifihliwe kubantu abavamile: imicimbi, imiphumela, izivivinyo namaqiniso, kodwa naphezu kwazo zonke amalebuli eziyimfihlo nokungazidalisi, enye idatha iyaziwa, futhi akukho lutho olungenziwa ngakho. Ake sibone amanye amavidiyo alahlekelwe isimo sabo sokufihla futhi aziwa emphakathini jikelele.
Izingxoxo zemfihlo zikaNeil Armstrong noMhlaba
Lapha imfihlo eyinhloko ayiyona ividiyo, kodwa irekhodi elilalelwayo lezingxoxo, lapho i-Armstrong no-Aldrin banikezelwa khona kwi-Mission Control Center eHouston, ukuthi ngesikhathi esifanayo nabo kanye nenyanga ngoMoya kukhona ezinye izikebhe ezivela kuzo lapho zibuka khona izimonyo. Ngokuthakazelisayo, isikhathi sokufika sithatha i-Buzz Aldrin ekhamera ekhethekile, lapho kwakukhona khona ifilimu enkulu, kepha lapho ebuyela eMhlabeni, kwabikwa ukuthi amarekhodi awazange asinde. Kuze kube manje, aziwa empeleni, lokhu kunjalo, noma amafilimu agcinwa ezinqolobaneni eziyimfihlo ze-CIA, njengefilimu ngokurekhoda kwezingxoxo ze-cosmonauts ne-PCO evele ivele eminyakeni engu-50 kamuva.
Abafokazi: iqiniso noma inkohliso
Ekuqhubekeni kwesihloko sesikhala, akunakwenzeka ukuthi ungakhulumi ngabafokazi. Uma kunesizathu esiphelele sokuthi kungani ukufika kweNyanga kuqoshwe emgodini (ifilimu yathola lokho okungekho muntu okumele akubone, ngakho kwakudingeka "i-peresnjat"), khona-ke inhloso yokudukisa lezi zimele ziyimfihlakalo. Amavidiyo amavidyo abonisa amaqiniso wangempela (noma cha) asakazeka kabanzi eminyakeni engama-5-6 eyedlule, enye yezingxoxo ezixoxwa kakhulu yilo. Ngaleso sikhathi ngesikhathi sokuxoxisana esilandelayo, ummeli womunye impucuko wagula. Amarekhodi amuva nje abonisa "ukuxoxwa" okugcwele "Zonke lezi marekhodi zihlanganisa into eyodwa: kusobala ukuthi akukho lutho olucacile. Abantu abaningi kakhulu bakholelwa ukuthi lezi azikhiqizi kakhulu, kodwa kukhona labo abanombono wokuthi lezi zizinto eziphilayo. Kungani le vidiyo ingatholakala kalula kwi-intanethi? Futhi kukhona impendulo ekulungele kulokhu: ngoba uma beqala ukususa, bekuzocaca ukuthi lokhu kuyinto ebalulekile, ngakho-ukuzijabulisa nokunye okunye.
Kuvaliwe ngaphambilini ukudubula izinto ezingabonakali ezindizayo
Uma kukhona nabafokazi konke kunengqondo kakhulu, khona-ke iqiniso lala mavidiyo ahlukanisiwe ngaphambili, alubangeli ukungabaza komuntu. I-Chile isungule ikhomishana kahulumeni ekhethekile yokutadisha i-UFOs futhi maduzane ochwepheshe bayo bathumele ividiyo ejabulisayo ekufinyeleleni komphakathi, eyafakwe ngoNovemba 2014 futhi yafundiswa ngokuphelele yiKomidi Ekufundeni kwePhenomena engavamile e-Atmosphere (CEFAA). Kule vidiyo yeminithi eyishumi, ungabona indlela into evele ngayo ngaphandle kwesikhashana ngemuva kokuphela kwesikhashana. Ngemva kokutadisha zonke izici, i-CEFAA inqume ukuthi into ayengeyena inyoni, indiza, i-parachutist noma i-anomaly emkhathini futhi isinikeze ngokusemthethweni isimo esingaziwa. Ngonyaka ofanayo, ngo-2014, ividiyo efana nayo yadutshulwa futhi ama-airmen aseMelika avuliwe le vidiyo nayo ibe ngemva kokuhlolwa ngokucophelela ngo-2017.
I-polygon eyimfihlo ephezulu "Zone 52" yadutshulwa kuqala kwividiyo
Kodwa kubalulekile ukukhumbula izibhamu ezincane ezingavumelani okwesikhathi eside. Isibonelo, i- "Zone 52" yafihlwa okungenani iminyaka engu-60. I-"Tonop" yokuhlola indawo, eyaziwa ngokuthi "i-Zone 52", isendaweni ye-Nevada, i-110 km ukusuka ebizwa ngokuthi "i-Zone 51", eyathi, ngokusho kwamamerica amaningi, iqukethe izingcezu ze-UFO ephahlazeka eRoswell ngo-1947. Ubukhona beToopy bekungabaza isikhathi eside, kodwa ezinyangeni ezimbili ezedlule, i-Sandie National Laboratories ye-US Department of Energy (SNL) yashicilela ividiyo ye "Zone 52" kusizinda somphakathi. Kule ndawo yokuhlola, kusukela ngo-1957, ukuvivinya kwezikhali zenuzi, ukuthuthukiswa kwamuva kwemishini yempi kanye nezinhlamvu kuye kwaqhutshwa. Ngokuyinhloko, kusukela ngo-1977 kuya ku-1988, kwakukhona uhlelo lokuqeqesha ngezindiza zaseSoviet.
Amanye amavidiyo afihliwe emphakathini
Ukudutshulwa okuncane okungaziwa kanye nokusebenza ngendlela ejwayelekile yeChernobyl nuclear power plant ngo-1997-98, okungukuthi, ngemuva kwengozi
Izivivinyo ze-Soviet yokuqala ye-hydrogen ibhomu 1953
Ividiyo kuphela ephuma emoyeni mayelana nokubhujiswa kwemibhoshongo emibili ngesikhathi sokuhlasela kwamaphekula kukaSepthemba 11
Imibhalo yomlando ye-NKVD
Ukwenziwa kwe-Bandera OUN-UPA. I-Kiev, ngo-1945
Isigwebo sabantu. Unyaka we-1943. Idokhumenti (i-TsKDF, 1943)
Ngothando, zonke izindlela zilungile
Futhi ngithanda ukushada
Umlingisi odumile uGrigory Antipenko
Inyama ngokusho kweLevantine
Ukuxhumana kwabazali abanesitabane
U-Anna Sedokova uhleka emanzini akhe "amafutha"
Ushizi nge-asparagus namaqanda we-quail
Ukuphuza ngokweqile ngesitayela sikaMojito
I-Easter ithenda le-cottage shizi
Indlela yokuziphatha namakhasimende anganelisekile
Indlela yokulungisa i-langet: zokupheka zangempela, ezanelisayo nezomnandi ngesithombe
Ukunciphisa ukuxilisa ngesikhathi sokukhulelwa
Ama-Shrimp ngaphansi kwe-brandy
Ukuphakama kwengcindezi yegazi ezinganeni
Ngumuphi umbala ofanelekile emehlweni aluhlaza okwesibhakabhaka?
Iyini isipiliyoni sokuqala socansi?
U-Ekaterina Klimova okhulelwe ushiye umyeni wakhe